ဂွာတီမာလာ စစ်အာရှင်ကို လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှုနဲ့ ထောင်နှစ်ရှစ်ဆယ်ချ
BBC News, 11May 2013 — ဂွာတီမာလာ နိုင်ငံမှာ ၁၉၈၂ ခုနှစ် နဲ့ ၈၃ ခုနှစ်တုန်းက အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်အာဏာရှင် သမ္မတ Efrain Rios Montt ဟာ သူအုပ်ချုပ်ခဲ့ချိန် အတွင်း Ixil Maya လူမျိုးစု ၁၈ဝဝ နီးပါးကို သတ်ဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့မှုနဲ့ အပြစ်ရှိကြောင်း စီရင်ချက် ချခဲ့ပါတယ်။
အဂတိ လိုက်စားမှုနဲ့ အိန္ဒိယ နိုင်ငံမှာ ဝန်ကြီးနှစ်ယောက် ရာထူးက နှုတ်ထွက်
BBC News, 10May 2013 — အိန္ဒိယ နိုင်ငံမှာ အဂတိ လိုက်စားမှု စွဲချက်တွေနဲ့ ထိပ်တန်း ဝန်ကြီးနှစ်ယောက် ရာထူးက နှုတ်ထွက်သွားပါတယ်။
အာဖရိက ဆင်းရဲမှု မမှန်မကန်လုပ်မှုတွေနဲ့လည်း ဆိုင်
BBC News, 10Mary 2013 — အာဖရိကတိုက်မှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိတဲ့ မိုင်းတွင်း စာချုပ် ချုပ်ဆိုမှုတွေ၊ မမှန်မကန် ငွေကြေး လွှဲပြောင်းမှုနဲ့ အခွန်ရှောင် မှုတွေကြောင့် နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ ၃၄ ဘီလျံ လောက် နစ်နာနေရကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူး ချုပ်ဟောင်း မစ္စတာ ကိုဖီ အာနန်က ပြောဆို လိုက်ပါတယ်။
မဇ္စျိမသတင်းဌာန. ၁၁ရက်နေ့ မေလ ၂၀၁၃ — ထူးကုမ္ပဏီများအဖွဲ့က ကြယ်လေးပွင့် အဆင့်ရှိဟိုတယ်၊ ရုံးခန်း၊ လူနေခန်းနှင့် ဈေးဝယ်စင်တာ တို့ပါဝင်သော ပြည်ထောင်စုရိပ်သာ စီမံကိန်းကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကာ ဆောက်လုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ထူးကုမ္ပဏီ၏ အကြံပေး ဦးလှဘော်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ပြန်ပေးသည့် လယ်မြေစာရင်း စစ်တပ်မှ အကြောင်းပြန်ပေးပို့မှု မရှိ
မဇ္စျိမသတင်းဌာန. ၁၀ရက်နေ့ မေလ ၂၀၁၃ —- ပြန်ပေးသည်ဆိုသည့် လယ်မြေစာရင်းကို စစ်တပ်မှ အကြောင်းပြန် ပေးပို့လာခြင်း မရှိကြောင်း လယ်ယာမြေ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးခိုင်မောင်ရည်က မဇ္ဈိမသို့ ပြောသည်။
အစိုးရ၏ ဥပဒေပိုင်းနှင့် ပေါ်လစီအား မှန်ကန်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်က စိုက်ပျိုးရေးတွင် ကမ္ဘာ့ထိပ်သီးရောက်နိုင်
မဇ္စျိမသတင်းဌာန. ၁၀ရက်နေ့ မေလ ၂၀၁၃ — မြန်မာနိုင်ငံတွင် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၌ ဥပဒေနှင့် ပေါ်လစီပိုင်းအား မှန်ကန်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါက ကမ္ဘာ့စိုက်ပျိုးရေး အခန်းကဏ္ဍတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ထိပ်တန်းရောက်လာနိုင်ကြောင်း အမေရိကန် နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အေဂျင်စီ (USAID) က ပြောသည်။
«1234567891011...218» English Version
Recent News	ဘက်ခမ်း ဘောလုံးကွင်းကို မျက်ရည်နဲ့စွန့်ခွာ